Maitiro Ekuwana Mawiricheya evakaremara Vashanyi kuDisneyland
Posted on November 16, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Disneyland Resort ndiyo Inonyanya Kufadza Nzvimbo Pasi Pano. Ino inzvimbo yakanaka kuti mhuri yese neshamwari vaungane pamwe nekunakidzwa. Disney agara achitenda mukunakidzwa kwevose uye ane akaita mapaki kufambidzana kune vese nekupa akasiyana zviwanikwa uye maidi e remara Vashanyi.
Kune avo vanoda kuwana mavhiripu inogona kuvaroja pamubhadharo wakaderera uye dhipoziti. Dzimba dziri kurudyi pamusuwo weDisneyland Resort. Iwe unogona zvakare kubvarura mawiricheya kubva pakusarudza mahotera eDisneyland Resort. Kune mamwe masevhisi anozopa kuendesa kuhotera yako kana theme paki pachayo asi yavo mitengo zvingasiyana.
manyuwari mavhiripu zviripo zvekurenda kuDisneyland Resort. hwiricheya maroja ari $ 12.00 pazuva uye $ 50.00 yeElectric Conveyance Vehicle asi mutero wekutengesa unoshanda kune iyo ECV yekubhadhara mari.
Kana uchirenda wiricheya yemanyorero kana ECV, ramba uchifunga kuti kune kunodiwa mari inodzoserwa ye $ 20.00.
ECVs dzakashongedzerwa ne USB madoko kubhadharisa mafoni ako uye dzinogona kukubatsira iwe kuchengetedza ako esimba maseru mukati mezuva rese.
Iwe haugone kuchengetera wiricheya rwendo rwako usati rwasvika, saka tamba kuti usvike mangwanani-ngwanani kuti uwane pekubhadhara nekuti vanogona kutengesa.
Iyi renti inogona kushandiswa mune ese Disney California Adventure Park uye Disneyland Park.
Vaenzi vanofanirwa kunge vaine makore gumi nemasere ekubhara ECV ine ID yemufananidzo. Kurema kwazvo kweECV mapaundi mazana mana nemakumi mashanu nemakumi mashanu wiricheya yemawoko rendi.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota tevera chinongedzo pazasi:
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged isina kurema wheelchair, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu.
Vanogona here Vanhu VamaWheelchair kuwana maBhenefiti Ekufungisisa?
Nzira yekuwana sei Wiricheya kuWalt Disney World?